IChalet eLuhlobo-Lusapho kwiChibi laBucala w/ iiKumkani ezi-2! - I-Airbnb
IChalet eLuhlobo-Lusapho kwiChibi laBucala w/ iiKumkani ezi-2!
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguJodee
I-2 yokulala-i-2 yokuhlambela i-chalet kwindawo enemithi yeehektare ezimbini ezinechibi labucala kunye nembono yezilwanyana zasendle ezimangalisayo. I-Innsbrook luluntu lwechibi olunegalufa, indawo yokutyela, ichibi loluntu elinomlambo onobuvila, nokunye okuninzi. Eli khaya libonelela ngokubaleka okumangalisayo kulo naliphi na ixesha lonyaka, kwaye kuphela ~ 45 min ukusuka eSt. Ukuqubha, isikhephe, i-kayak, ibhodi yokubheqa, ukunyuka, igalufa, yitya, sela, RELAX, dlala imidlalo, upholile phambi kweziko, okanye uzenzele eyakho i-adventure. Kuphela yimizuzu emi-5 yokuqhuba ukuya kwindawo yogcino-zilwanyana engaqhelekanga okanye kwindawo yokuthengisa iwayini ephezulu.
Iisizini ezi-4 ezigqibeleleyo zokubaleka usapho! Le chalet intle inazo zonke izinto zangoku kunye nechibi labucala kunye neebhedi ezimbini zokumkani! Ukuhamba umgama ukuya eLake Aspen (ukuba ujonge ichibi elikhulu elinamalwandle entlabathi, ibhola yevoli, ukuqubha, kunye nemidlalo yasemanzini) kunye nezantsi nje indlela esuka kwibala legalufa, indawo yokutyela kunye neklabhu yeklabhu. Ukuhamba okufutshane ukuya kwindawo entsha yokuzonwabisa yaseCharrette Creek Commons ene-pool, umlambo onobuvila, iziko lokufaneleka, ibala lokudlala kunye ne-amphitheatre yangaphandle kwiikonsathi zamahhala zangoMgqibelo (May29th - Sept.3). Ukuqhuba imizuzu emihlanu ukuya kwiBig Joel's Safari Petting Zoo okanye kwiCedar Lake Cellars. Indawo yomlilo esezantsi ukuya eluphahleni iya kukugcina ushushu kwiinyanga zasebusika njengoko uphumla kwenye yee-recliners EZINTATHU kwaye ujabulele iimbono. Sinemidlalo eyahlukahlukeneyo kunye nezinto ezilungele abantwana eziquka iilounger ezintathu zeembotyi zeBig Joe, iTV ene-xbox console, imidlalo yaseyadini, imidlalo yebhodi, iimuvi nokunye. Wamkelekile ukuba usebenzise iipali zokuloba, iibhatyi zobomi, izitulo zaselwandle kunye neetawuli, iicoolers, iikomityi ezigqunyiweyo kunye nezihlalo ezidadayo ezigcinwe kwipropathi! Izilwanyana zasekhaya ezingalahliyo ziyaqwalaselwa, imirhumo eyongezelelweyo iyasebenza ukuba ivunyiwe.
Amagumbi amabini okulala
Iibhafu ezimbini ezigcweleyo (zombini zineshawari)
Indawo ephezulu eneebhanki (Iwele ngaphezulu lizele) - izikrini zabucala zinikezelwe
Ikhebula kunye ne-Intanethi
Ipatio eyandisiweyo kunye nomgangatho wokusonga
Indawo yokupaka yabucala
I-Microwave, umenzi wekofu, i-blender
UMHLAWULO ophantsi wokucoca!
4.91 · Izimvo eziyi-111
I-Innsbrook yindawo ehlala i-pristine echibini elibiyelwe ngaphantsi kweyure ukusuka eSt Louis apho unokonwabela indalo unyaka wonke. Kungaphantsi kwemizuzu emi-5 ukusuka kwiBig Joel's Safari Petting Zoo kunye neCedar Lake Cellars. I-Innsbrook yeyona nto ilungileyo yosapho!
Umbuki zindwendwe ngu- Jodee
Eli khaya lilonke lelakho ukuba uyonwabele ngasese ngexesha lokuhlala kwakho, kodwa ndifumaneka ngefowuni ngemibuzo!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wright City